အမေရိကန်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Idiom အသုံးအနှုန်းများ အပိုင်း - ၉
၁၇ ဇွန်၊ ၂၀၀၈
လက်ရှိ အမေရိကန်သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲအခြေအနေကို ကြည့်မယ်ဆို ရင် ဒီမိုကရက်ပါတီက သမ္မတ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နှစ်ဦးတို့ဖြစ်ကြတဲ့ အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဘားရက်ခ် အိုဘားမား (Barack Obama) နဲ့ ဟီလာရီ ကလင်တန် (Hillary Clinton) အကြား ဘယ်သူက လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ ရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာ ပါတီရဲ့ သမ္မတကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ၀င်အရွေးချယ်ခံမယ်ဆိုတာ အခုတော့ မစ္စတာ အိုဘားမား ဖြစ်ဖို့ သေချာနေတော့ သူတို့နှစ်ဦးအကြား အရင်က ဝေဖန် ပြောဆိုခဲ့ကြတာတွေဟာ ကြာကြာနေရင် ပါတီရဲ့ စည်းရုံးရေးကို ထိခိုက်စေတယ် ဆိုပြီးတော့ အခုတော့ သူတို့နှစ်ဦး ပါတီအကျိုး ရှေးရှုပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေ ကြပါပြီ။
အခုလို အရင်က ပြောမှားဆိုမှားရှိပြီး မတည့်တဲ့အခြေအနေမျိုးကနေ ပြန်ပြီး ပြေလည်အောင် ကြိုးစားနေတဲ့အခြေအနေတွေကို သတင်းမီဒီယာတွေက Mend The Fences ဆိုတဲ့ အီဒီယမ်ကို ရည်ညွှန်းသုံးနှုန်းလာကြတာ တွေ့ရပါ တယ်။ စာလုံးပေါင်းက Mend ပြုပြင်တာ၊ ပြင်ဆင်တာ၊ ပြန်ကောင်းအောင် လုပ်တာ၊ The Fences က ခြံစည်းရိုးတွေဆိုတော့ စကားပိုဒ်တခုလုံးရဲ့ လုံးကောက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ခြံစည်း ရိုးတွေကို ပြန်ပြီးပြင်တာပေါ့ရှင်။ ဒီအသုံး ဆင်းသက်လာတာကတော့ ၁၈၉၇ ခုနှစ်က Ohio ပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော် အမတ် ဂျွန်ရှယ်မန် (John Sherman) လက်ထက်က ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
သူက သူ့ဋ္ဌာနေကနေ ကြာကြာခွဲခွာပြီးတဲ့နောက် ပြည်နယ်ကို ပြန်လာတဲ့ အခါမှာ သူက ခြံစည်းရိုးတွေ ပြန်ပြင်ဖို့ ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ သူ့ရဲ့ မိန့်ခွန်းထဲမှာ ထည့်သွင်းပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူဆိုလိုခဲ့တာကတော့ နှစ်မျိုးရှိပါ တယ်။ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ သူ့လယ်ကွင်းကို ကာထားတဲ့ ခြံစည်းရိုးတွေ ကို ပြန်ပြင်ဖို့ ရည်ရွယ်သလို နိုင်ငံရေးအရလည်း သူ အကြာကြီး ခွဲခွာခဲ့ရတဲ့ သူ့ ပြည်နယ်သားတွေရဲ့ အကျိုးကို ရှေးရှုဆောင်ရွက်ပြီး သူ့ကို ထောက်ခံမှု ပြကြဖို့ ပြောဆိုတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကစလို့ ဒီအီဒီယမ်အသုံးဟာ နိုင်ငံရေး လောကမှာ ပြန်ပြီးပြေလည်မှုကို ရည်ညွှန်းအသုံးပြုလာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့လို့ အီဒီယမ်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ မပြေလည်တဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ပြန်ပြေလည်အောင် ပြုလုပ်တာပေါ့။ ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်လို့ George Grow ပေး တဲ့ ဥပမာကို နားဆင်ကြည့်ကြရအောင်။
"The man is trying to mend the fences with members of the city council. So, they will approve his plan."
မြို့တော်ဝန်တွေနဲ့ မြို့တော်ရဲ့ ကောင်စီဝန်တွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးပြန် ပြေလည် စေဖို့ ကြိုးပမ်းနေလေရဲ့။ သူ့ရဲ့ အစီအစဉ်အပေါ် ၀ိုင်းထောက်ခံမှု ရရအောင်ပေါ့လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
Mend the fences လိုပဲ ဆင်တူယိုးမှားရှိတဲ့ နောက်ထပ် အီဒီယမ်အသုံး ကတော့ Bury the Hatchet ဆိုတဲ့အသုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ စာလုံးပေါင်းက Bury က မြေမြှုပ်တာ၊ The Hatchet ကတော့ ပုဆိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စကားပိုဒ် တခုလုံးရဲ့ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ပုဆိန်ကို မြေကြီးထဲမှာ မြှုပ်တာပေါ့ရှင်။ ဒီအသုံးဆင်းသက်လာတာကတော့ အမေရိကန်တိုင်းရင်း အင်ဒီးယန်းတွေရဲ့ ရိုးရာကပါ။ သူတို့အသုံးစကားမှာတော့ ပုဆိန်ဖြစ်တဲ့ Hatchet ကို တော်မဟော့ လို့ ခေါ်ပါတယ်။
အမေရိကန်တိုင်းရင်း အင်ဒီးယန်းတွေ မျိုးရိုးချင်းကွဲကြရာမှာ အချင်းချင်း ရန်ဖြစ်ကြ၊ သတ်ကြ၊ ဖြတ်ကြ၊ ခုတ်ကြ၊ ထစ်ကြ တဲ့အခါမှာ တော်မဟော့ ဆိုတဲ့ ပုဆိန်ကို သုံးသလို လေးနဲ့မြား ကိုလည်း အသုံးပြုတာ သောတရှင်များ ရုပ်ရှင် တွေထဲမှာ မြင်ဖူးချင် မြင်ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ သူတို့အချင်းချင်း ငြိမ်း ချမ်းရေးယူဖို့ သဘောတူတယ်၊ အပစ်အခတ်ရပ်စဲမယ်၊ တဖက်နဲ့တဖက် သတ်ဖြတ်တာတွေ တိုက်ခိုက်တာတွေ မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင် ဓလေ့ကတော့ သူတို့နှစ်ဖက်စလုံးသုံးတဲ့ ပုဆိန်ကို မြေကြီးထဲ မြှုပ်ပြီးတော့ သင်္ကေတသဘောနဲ့ အခမ်းအနား ကျင်းပလေ့ရှိတာကနေ ဒီအသုံးဆင်းသက်လာတယ်လို့ သိရပါ တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လည်း နောက်ပိုင်းမှာ တဦးနဲ့တဦး ရန်မဖြစ်တော့ဘူး၊ ကြေအေးမယ်။ ကျမတို့ မြန်မာ ဗန်းစကားအရတော့ ပြန်ကြေမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအီဒီယမ်အသုံးကို ရည်ညွှန်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
အမေရိကန်နဲ့ ပြင်သစ်နှစ်နိုင်ငံအကြား မကြာသေးမီက ဆက်ဆံရေး ပြန်ပြီးပြေလည်အောင် ကြိုးပမ်းမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ George Grow ပေးတဲ့ ဥပမာ ကို နားဆင်ကြည့်ကြရအောင်။
"Washington and Paris bury the hatchet when US President George W. Bush warmly greeted his French counterpart at the White House, abandoning several years of strange relation over the Iraq war."
၀ါရှင်တန်နဲ့ ပဲရစ်အကြား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ အမေရိကန်သမ္မတ ဂျော့ ဒဘလျူ ဘုရှ် က အိမ်ဖြူတော်မှာ ပြင်သစ်သမ္မတကို နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုခဲ့တယ်။ အီရတ်စစ်ကြောင့် နှစ်နိုင်ငံအကြား တင်းမာနေတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို စွန့်ပစ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်လေလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
နိုင်ငံရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နေ့စဉ်ဘ၀မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေအေးချင်တယ်။ ပြန်ပြီး သင့်မြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုအသုံးတွေသုံးမလဲ။ Mend the fences, Bury the hatchet တို့ကို အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ နောက်သီတင်းပတ်မှာလည်း သော တရှင်များကို အလားတူ နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အီဒီယမ်အသုံးတွေကို တင်ပြ ပေးဦးမှာမို့ စောင့်မျှော်နားဆင်ကြပါရှင်။